Tanora · Marsa, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Marsa, 2015
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Marsa, 2015
Sarimiaina 5 Mampiroborobo Ny Zon'Olombelona Sy Ny Fitovian-jo ao Myanmar
Sady tsotra no manome fampianarana ny lahatsary. Azo ampiasaina any amin'ny firenen-kafa ihany koa, natao hoan'ny rehetra sy mora takarina ny lohahevitra.
Amerika Latina26 Marsa 2015
Japana25 Marsa 2015
Mila Fampianarana Ara-Pananahana Ve i Tajikistan?
Azia Afovoany sy Kaokazy08 Marsa 2015
Ao amin'ny firenena izay tokony ho virijiny avokoa ny vehivavy alohan'ny fanambadiana, mampiadi-hevitra ny tolo-kevitra mikasika ny fampianarana ara-pananahana any an-tsekoly. Saingy efa mihatra izany ankehitriny.
Sarin'Ankizy Filipino Miasa Amin'ny Fitrandrahana sy Fambolena Fary Hampilatsa-dranomaso Anao
Azia Atsinanana05 Marsa 2015
"Efa efa-taona aho izao no tsy nianatra intsony. Kilasy fahenina ihany no mba vitako ary tsy maintsy nijanona aho ahafahako miasa."
Saripika Roa Ambitelopolo Ahitàna An'i Afganistana Vaovao
Azia Afovoany sy Kaokazy03 Marsa 2015
Aaquib Khan, Indiana mpaka sary fanao an-gazety, nandeha nisidina hijery an'i Kabul renivohitra Afgàna, izay nalaky nivoa be tamin'ny 2014. Nifampizaràny tamin'ny Global Voices izay hitany tao anatin'ny tanàna.